शा’रीरिक सम्बन्धपछि किन चाडै निदाउँछन् पुरुष ? यस्ता छन् महिलाले सोच्ने कुरा. . – Ujyaalo Patrika
शा’रीरिक सम्बन्धपछि किन चाडै निदाउँछन् पुरुष ? यस्ता छन् महिलाले सोच्ने कुरा. .
महिला र पुरुषबीच शा,री रिक सम्बन्ध भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउँने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ ।
शा’री रिक सम्बन्ध राख्ने वित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउँने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आ रो पहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौ’ न स म्प र्क राख्नेवित्तिकै निदाउँने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई यौ,न स म्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? सामान्यतयाः रातको समयमा शा,री रि क स म्बन्ध राख्ने गरिन्छ ।
रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । शा,री रि क स म्बन्ध राख्ने वित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, शा,रीरिक सम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । शा,री रि क स म्ब न्धको बारेमा महिला र पुरुषको शरीरमा भिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उ, त्तेजित हुन्छ र महिलाहरु शारीरिक सम्बन्धपछि झन् बढी पुरुषको मायामा पर्छन् ।
पुरुष अग्रानिज्म भने शा, री रि क स म्बन्ध पछि इज्याकुलेट हुन्छ र हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जसले शरीरमा आलस्यता पैदा गर्छ साथै शा,री रि क स,म्ब न्धको दौरान शरीर निकै थाक्ने भएकाले पुरुषहरु छिट्टै निदाउँने विभिन्न अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
तर महिलाहरु शा,री रि क स,म्ब न्ध पछि के चाहान्छिन् त – शा, री रि क सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र शा,रीरिक सम्बन्ध राख्न रुचाउँछन् । शा, रीरिक सम्बन्धले महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने शा,री रिक सम्बन्ध पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । शा, री रिक सम्बन्धपछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन् ?
हेर्नुहोस् शा, री रि क सम्बन्धपछि महिलाहरूले सोच्ने १२ कुराहरू –
१ आनन्द र सन्तुष्टीबीच फरक – किं,स ले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै साधन नलगाई शा,री रिक स,म्बन्ध गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी साधन लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
२ विस्तारै गरेको राम्रो – शा,री रि क सम्बन्धका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना सं,दनशील कोमल अं,गमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अं,गसँग संवे,दनशीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरुलाई मन पर्छ ।
३ मादकपदार्थ सेवन गर्ने चाहना – शा,री रि क सम्बन्धपछि केही महिलालाई र,क्सी से वन गर्ने मन पनि हुन्छ । त्यो बेला उनलाई र,क्सीले आफूलाई फाइदा गर्छ वा गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन ।
४ भोक लाग्नु – शा,री रि क सम्बन्धका क्रममा शक्ति खर्च हुन्छ । यसकारण तपाईको जोडीले भोक लागेको महशुस गरेका हुन्छ ।
५ तपाईप्रति सकारात्मक – यदि शा,री रि क सम्बन्धका क्रममा तपाइले जोडीलाई सन्तुष्टी दिन सक्नुभयो भने उनले संसर्गपछि तपाईप्रति सकारात्मक सोच्न थाल्छिन् । चाहे उनले यसको संकेत दिन पनि सक्छिन्, नदिन पनि सक्छिन् ।
६ शा,री रि क सम्बन्ध एक काम – कुनै महिला सं,सर्गलाई एक महत्वपूर्णका कार्यका रुपमा लिन्छिन् । जुन पुरा हुने वित्तिकै आफ्नो अर्को काममा लाग्ने गर्छिन् ।
७ शा,री रि क स,म्बन्ध गरेकोमा विश्वास नलाग्नु – कयौं पटक महिलाहरुलाई आफूले कसैसँग शा री रि क सम्बन्ध राखेको कुरा पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ । यस्तो दुइवटा परिस्थितीमा हुन सक्छ । पहिलो, जब शा,रीरिक सम्बन्ध गर्ने व्यक्ति पहिलो पटक सं,सर्ग गरिरहेका छन् र दोस्रो, जब महिला जोडीलाई आशा गरे विपरित स,म्पर्क भएमा ।
८ के म उनको लागि ठीक थिएँ – शा,री रि क सम्बन्धपछि कतिपय महिलाको मनमा आफू आफ्नो जोडीको लागि ठीक थिएँ त भन्ने कुरा पनि मनमा लाग्ने गर्छ । उनी आफूसँगको सम्पर्कबाट आफ्नो जोडी सन्तुष्ट भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि जान्न चाहन्छिन् ।
९ उसले गर्ने मायामा फरक त पर्दैन – कैयौं पटक महिलाहरुलाई शा,री रि क सम्बन्धपछि आफ्नो जोडीले पहिलेको जस्तै माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा हुन्छ । यस्तो विषयले महिलाहरुलाई बढी सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
१० कतै मैले यो गलत त गरिनँ – यदि कुनै महिला आफ्नो श्रीमान वा ब्वाइफ्रेण्डलाई धोका दिएर अन्य कसैसँग शा,री रि क सम्बन्ध राख्छिन् भने उनलाई आफूले यो के गरेको भन्ने मनमा खेल्ने गर्छ । उनलाई पछि आफूले यस्तो गर्न नसक्ने सोच्छिन् ।
११ दोस्रो पटक पनि गर्न सक्छौं – कुनै बेला महिलाहरु शा,री रि क सम्बन्धबाट यति धेरै सन्तुष्ट हुन्छिन् कि उनी अर्को पटकका लागि पनि तुरुन्तै तयार हुन्छिन् । त्यसका लागि आफ्नो जोडीको मन तान्न थाल्छिन् ।
१२ समय अभाव भएको महशुस – महिला जोडीलाई शा, री रि क सम्बन्धका क्रममा समयलाई लिएर तपाइप्रति निकै अपेक्षा हुन्छ । उनले तपाईलाई खरो रुपमा उत्रेको देख्न चाहन्छिन् । नभए उनी निराश समेत हुन्छिन् ।
Previous आफुले चाहे अनुसार : छोरा जन्माउने की छोरी, यि शुत्र प्रयोग गर्नुहोस्